पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित
पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित
२०७७, २ जेष्ठ शुक्रबार ०९:१०
चैत ११ गते सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पनि काठमाडौंमा आवागमन रोकिएको छैन। थानकोट, फर्पिङ, जगातीलगायत नाकाबाट छिर्ने क्रम बढेपछि उपत्यकावासी असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्छन्, ‘लकडाउन घोषणा नाम मात्रको छ।
पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने उपत्यकामै संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित छ।’स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाकाले सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको खतरा रहेकाले सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा डा। देवकोटाले सचेत रहन आग्रह गरेका हुन्।‘संक्रमित धेरैजसो २० देखि ५० वर्ष उमेर समूहका छन्। सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई संक्रमण हुन सक्छ, सबैलाई सचेत र सजग रहन आग्रह गर्दछौँ,’ डा। देवकोटोले भने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
Previous articleसवारी पास रद्द भएपछि झापामै रोकिन बाध्य पूर्वराजा शाह
Next articleसुगौली सन्धिपछिको नक्सामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा, तर नक्सामा किन त्यो समेटिएन ?
८० वर्षीय बुवाको हत्या आरोपमा छोरा पक्राउ